Gaaffii ummataa deebisuuf oggantoonni dammaqinaan hojjechuu qabu
Gaaffii ummataa deebisuuf oggantoonni dammaqinaan hojjechuu qabu Featured
Gaaffiilee ummataa deebisuuf oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran dammaqinaan hojjechuu akka qaban miseensi koree raawwachiistuu hojii dhaabbatichaa Obbo Tafarii Xiyyaaroo ibsan.
Akka isaan konfaransii miseensota dhaabbatichaa Godina Iluu Abbaa Booraatiif Magaalaa Mattuutti qophaa'erratti jedhanitti, tattaaffiin DhDUOn gaaffii ummataa deebisuuf taasisaa jiru akka milkaa'uuf oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran dammaqinaan hojjechuu qabu.
Gadifageenyaan haaromsamuudhaan rakkoolee gama bulchiinsa gaarii, misoomaafi kenniinsa tajaajilaatiin mul'atan furuuf tattaaffii taasifameen jijjiiramoonni onnachiisoon galmaa'aniiru.
Ta'us gama ittiquufiinsa ummataa mirkaneessuutiin hojiileen hafan akka jiran ibsaniiru.
Oggantoonniifi miseensonni DhDUO sadarkaa sadarkaan jiran gaaffii ummataa deebisuuf dursanii ofumasaaniitii gadifageenyaan haaromsamuudhaan miira tajaajilummaa gonfachuu akka qaban hubachiisaniiru.
Dhiyoo ta'anii garraamummaafi haqummaan tajaajiluuf yoomiyyuu caalaa tattaafachuu akka qabanis hubachiisaniiru.
Bulchaan Godina Iluu Abbaa Booraa, Obbo Namarraa Bulii gamasaaniin, barana haaromsa gadifageenyaatiin yaadota hawaasichaafi miseensota dhaabbatichaatiin dhufan bu'uura godhachuun oggantoota 92 kanneen rakkoo qaban ittigaafatamummaarraa akka ka'an taasifamuusaa ibsaniiru.
Haaromsi gaifagoon ittifufiinsaan hawaasicha hirmaachisuun akka adeemsisu eeranii, oggansi gaaffiilee ummataa dhaggeeffachuudhaan miira tajaajilummaatiin hojjechuu akka qabu hubachiisaniiru.
Gaaffiilee ijaarsa istaadiyoomii Iluu Abbaa Booraafi buufata qubannaa xayyaaraarratti ummanni kaase deebisuuf tattaaffiin taasifamaa akka jirus beeksisaniiru.
Buufata xayyaaraa naannawichatti iajaaruuf hojiin qo'annoo geggeeffamaa jiraachuufi maallaqa ijaarsa istaadiyoomiif barbaachisu hirmaannaa ummataatiin walitti qabuu eegaluuf tattaafatamaa jiraachuu eeraniiru.
Torban kana/This_Week 7726
Guyyaa mara/All_Days 1817146